Aangawoota DHDUO FaarsuurrattiÂ Ni Jarjarree Laata? Oromia Shall be Free |
Aangawoota DHDUO FaarsuurrattiÂ Ni Jarjarree Laata?
bilisummaa December 12, 2017	Comments Off on Aangawoota DHDUO FaarsuurrattiÂ Ni Jarjarree Laata?
Hawi Anole ~ Mud/2017
Cunqursaa waggoota hedduuf uummata keenyarra gahaa tureef qaamoleen itti gaafatamummaa qaban danuudha. Erga sirni ADWUI biyyattii qabatee as garuu gaheen DHDUOn uummata keenya alagaadhaan gabroomsuuf qabu baayâ€™ee olâ€™aanaadha. Alagaa Afaaniif lafa keenya hin beekne gandaa hanga gandaatti masakuurraa kaasee Lammii Oromoo Oromummaa isaaf dhukkubsatee dubbate hunda kan eeree hisiisaa, tumsiisaafi ajjeesisaa baye DHDUOdha. San hundarras dabree Oromoo diinaan ajjeefameef gadduufi nahuu dhiisee alagaa rasaasaan guyyaa adiidhan nu ajjeese hoggansi galateemfachaa ture akka dabres waanuma hundi keenya beeknudha. Gama kanaan waan hedduu waan beektaniif dubbii balâ€™isuun faaydaa hin qabu.
Aangawoonni DHDUO harâ€™aa yeroo haasaa jijjiiramaa eegalan, yeroo waan tokkummaa Uummata keenyaa faarsan, yeroo Uummata keenya malee homtuu nu hin ajaju, Ammaan achi kan nu masaku uummata keenya yeroo jedhan hedduun keenya itti qoosaa, ija shakiitiin ilaalaa turre. Irra deddebinees isaan madaalle. Madaallii keenyaan hundi keenya akka dhuunfaa dhuunfaa keenyaatti waan itti amanne uummata keenyaaf qooduu eegalle. Anis gama kootiin, hanguma fedhe shakkii qabaadhus, hoggansi DHDUO yeroo ammaa isa duriirra harka dhibbaan akka caalu ifatti dubbadhe. Kana jechuudhaaf immoo waan ragaadha jedhe hunda dhiheesseen ture. As biratti wanti hubachuu qabnu jijjiirama hoggansa siiviiliifii hoomaa waraanaa jidduu garaagarummaan guddaa jiraachuu isaati.
Ajjeechaan kaleessa Calanqootti raawwatame kan hunda keenya gubeedha. Gamtokkoon duuti ilmaan teenyaa yoo garaa nu nyaatu gam birootiin immoo haalli gabaasa dubbichaa kan hunda keenya gaddisiise ture. As biratti namoonni hedduun aaridhaan DHDUO abaaruu, hoggansas akkuma dur arrabsuutti kaâ€™an. Kuni waanuma eegamuudha. Dhiigatu dhiigaaf rifataaf lammii keenyaaf rifatee namni hundi waan jedhu jedha. Taâ€™us garuu haqa jiru eegaa adeemuun egeree keenyaaf faaydaan inni qabu guddaadha. Diinni keenya harâ€™as, kalees ifuma jira. Tarsiimoon dur ittiin nu dhahaa turan nu qoqqooduu ture. Qoqqoodamiinsi suni â€˜hirribaa dammaqiinsaâ€™ Aangawoota DHDUOtiin hamma tokko laaffataa dhufee Tokkummaan keenya sadarkaa gaarii irra gahuu dandaâ€™eera. Diinni ammas qaawwa kamiyyuu fayyadamee adeemsa kana dhawuu barbaada. Tarsiimoo kana keessaa inni tokko immoo Uummataafi hoggansa eddoo duritti deebisee wal nyaachisuudha. As biratti nuti qarummaadhaan diina dursinee argamuun dirqama nutti taâ€™a. Hammuma feene gaddinus, diinaaf qaawwa banuun nurra hin jiraatu. Tarii kan akka koo kompiyuutara/ bilbilarra taaâ€™ee barreessuuf eenyunuu arrabsuun, kallattii qabsoo lafa kaaâ€™un, gorsuun, ajaja dabarsuun salphaa taâ€™uun isaa ni mala. Garuu abidda biyyaa belbelu sana keessa dhaabatanii falmuun garuu waan biraati. Inni qamaan keessa taaâ€™anii qabsaaâ€™an aarsaa, gootummaafii kutannoo jajjaba gafata. Kanaafuu, hundi keenyayyuu hamma dandeenyeen obsa dabalachaa adeemuu malee shira diinaatiin butamnee akka ofduuba hin furguggaanne amaanaa isinitti dhamachuun barbaada.
Previous Muddee 11/2017 Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa Magaalaa Calanqoo ..
Next Mootota ItiyoophiyaaÂ Â Mootoota shiraa fi Soba Malee Hin Jiraanne!
KOREE AYYAANA YAADANNOO WAGGAA 50-FFAA QABSOO HIDHANNOO â€“ OROMIYAA (1963)
Galmo Leencoota dhaloota Dire Baha: You so stupid. Salphata hattummaan Leencoo waliin gaggeysa turtan haâ€™ammaa Oromo...